SVG ayaa laga dhoofiyaa Sawirka > Vielhuber David
SVG ayaa laga dhoofiyaa Sawirka09
Shaqada guud ee dhoofinta waxaa laga heli karaa " Faylka> Dhoofinta> Dhoofinta sida ... ". Ugu dambeyntii, xulo " SVG (* .SVG) " nooca feylka. Haddii aadan rabin inaad gooyso aagagga hufan oo aad tixgeliso aagga sawirka, hubi " Isticmaal aagagga sawir ", haddii kale maahan. Wadahadalka soo socda waxaad dooraneysaa xulashooyinka soo socda:
Haddii aadan ku qanacsanayn heerka faahfaahinta waddooyinka natiijada, waxaad si tartiib tartiib ah u kordhineysaa meelaha jajab tobanlaha ah 3 ama 4.
Waxay noqoneysaa mid xiiso leh markaad ku dhexjirto feylasha feylalka. Kuwani sidoo kale waa la tirtiri karaa (tani waxay u horseedaysaa cabirro faylal oo yar yar iyo iswaafajin kordhay markii la isticmaalayo qalabka daabacaadda sida dompdf )
Waxaa jira laba siyaabood oo caan ku ah Sawirka: Marka hore, waxaad ku calaamadeeysaa walxaha oo dhan CTRL + A oo xulo " Ujeedo> Hoos u dhig hufnaanta ... ". Markaa waxaad ka saareysaa waji-gooska jira oo loo yaqaan " Object> Clipping Mask> Beddel ". Haddii taasi shaqeyn weydo, samee waxyaabahan soo socda halkii aad ka dooran lahayd labada tallaabo ee ugu dambeysa: Marka hore xulo " Ujeeddo> Beddel ...> OK " ka dibna dooro " Ka saar aagga isdulsaarka " xulashada ku jirta wada hadalka Pathfinder:
SVG-ka ugu dambeeya ayaa markaa lagu sii wanaajin karaa qalabyada sida svgo (khadka amarka ama shabakadda GUI ).